Haween jalaabiib uga qayb-galaya tartan maraton ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haween jalaabiib uga qayb-galaya tartan maraton ah
La daabacay fredag 20 maj 2016 kl 14.04
"Ujeedada waa in haweenka soomaalida soo dhex-galaan bulshada"
sawir: Kenadid Mohamed/SR
Haween soomaali ah oo ka qayb-geli doona tartan maraton ah iyagoo ku labisan xijaab iyo jalaabiib.
Sabtida ayey dhowr dumar soomaali ah ka qayb-geli doonaan orad maradon gaaban ah oo lagu qaban doono xaafadda Skärholmen magaalada Stockholm. Muddo Siddeed todbaad ayey haweenkan soomaaliyeed ugu jireen diyaargarow iyo tobobar ka qayb-galka tartankan, sida ay noo sheegtay Ubax Moxamed Farax oo ah guddoomiyaha ku xigeenka ururka waalidiinta somaaliyeed ee Skärholmen.
- Waxaan ordi doonaan shan kilomitir orad ah.
Maamulka xaafadda Skärholmen ayaa ururka waalidiinta soomaaliyeed weydiiyey in haweenka soomaalida ah ka soo qayb-galaan tartankan orad ee ah maraton-ka gaaban ah. Markay aqbaleen soo jeedintas ayey ayey maamulka xaafadda ka codsadeen in loo qabta qof tabobare si ay ugu diyaargaroobaan ka qayb-galka oradkan. Muddo sidded todbaad ah ayey aalamiito soo qaateen, imminkana waxay dareemayaan in ay si wanaagsan uga qayb-gali karaan tartanka. Laakiin waxay kaga duwanaanayaan dadka kale ee oradka ka qayb-galay dharka ay ku ordahayaan. Waayo waxay oradka uga qayb-galayaan shuko, jalaabiib iyo weliba xijaab.
- Labiskayagu waxuu noqon doonaa, dusha funaanado naloo qaybin doono ayaan ka gashan doonaa, oo namber ku dhagan yahay. Dharka hoose, xijaabkaaga, shukadaada iyo qamaarkaaga ayaa qabeysaa iyo kabo lagu ordo. Qofkiise surweel ku ordahaya waa ku ordi karaa ayey tiri Ubax Moxamed Faarax.
Waxayse sheegtay iyada in ay ku ordi doonto surweel laakiin ay jiri doonaan haween kale oo iyaga ku ordi doona jalaabiib iyo shukooyin. Ujeedada se laga leeyahay waxay tahay in dumarka soomaalida ay ka qayb-qaataan mehradah xaafadahooda ka jira bulshadana soo dhex-galaan, ayey tiri Ubax Faarax.
- Macanha kale ee weyn ee aan rabno in aan muujino waxa weeye, innagoo dharkayaga ee hidaha iyo dhanqanka ah wadana ee soomaalida ku labisato, ee ah xijaabka, jshaalka ama jalbaabka in uu mehrada bulshada qofka ka qayb-qaato. Taas oo micnaheeda tahay in uu bulshada soo dhex-gali karo asagoo waxiisa wata uu ka qayb qaato wax kasta oo bulshada sameyneyso. Ayey tiri Ubax Moxamed Faraax oo ah guddoomiye ku xigeenka urur waalidiinta soomaliyeed ee xaafadda Skärholmen ee Stockholm.